स्वास्थ्य Archives | Page2of 15 |
२०७५, ३ भाद्र आईतवार १०:३० August 19, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी : नियमित रुपमा स्याउ खाँदा महिलाको यौनेच्छामा वृद्धि हुनुका साथै सहवासबाट हुने चरमसुखमा समेत वृद्धि हुने तथ्य पत्ता लागेको छ । इटालीमा गरिएको अध्ययनले दैनिक रुपमा कम्तिमा पनि एक दाना स्याउ खाने महिलामा यौनक्रिडाबाट हुने सन्तुष्टिमा वृद्धि हुने तथा…
छिटो गर्भधारणका लागि अपनाउनुपर्छ यी सूत्र
२०७५, २९ श्रावण मंगलवार २३:३१ August 14, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी : बिवाहपछि सन्तानको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । जब बिहे गरिन्छ, सन्तानको लोभ लाग्न थाल्छ । अक्सर महिला आफ्नो काखमा बच्चा खेलाउन लालयित हुन्छन् । यसका लागि कतिले निश्चित अवधी तय गर्छन् । अर्थात आफुलाई व्यवस्थित गरिसकेपछि मात्र बच्चा…
गोरो हुनका लागि क्रिम लगाउनुहुन्छ ? त्यसो भए थाहा पाउनुहोस् यी कुरा
२०७५, २५ श्रावण शुक्रबार १९:०६ August 10, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
बीबीसी: क्रिम लगाउनु गलत होइन तर क्रिम कुन कारणले लगाइन्छ, शरिरको कुन भागमा लगाइन्छ र यसमा के के मिश्रित छ, त्यो जान्न आवश्यक छ । विशेषज्ञका अनुसार यदि तपाईं माथि उल्लेखित कुरामा ध्यान दिनुहुन्न भने क्रिमका गम्भीर साइड इफेक्टसमेत भोग्नु…
स्तनलाई उचित आकारमा सजाउने ८ तरिका , महिला मित्रहरुले अवश्य पढौं र शेयर गरौं
२०७५, २० श्रावण आईतवार १०:३४ August 5, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी : तपाई सचेत हुँदा हुदै पनि कतिपय तपाईका जीवन शैली र आतद (बानी) ले तपाईको स्तनको स्वास्थमा गम्भीर असर गरेको हुन सक्छ । तपाईको स्तनलाई सदा स्वस्थ्य र ठूलो आकारमा सजाई राख्न तपाईले तलका विषयमा ध्यान दिनुपर्छः लामो समयसम्म…
भित्री खुलासा !! आखिर कोही व्यक्ति पशुसँग किन सेक्स गर्न चाहन्छ ?
२०७५, १५ श्रावण मंगलवार ११:१७ July 31, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
बीबीसी : भारतको हरियाणास्थित मेवात इलाकामा एक गर्भवती बाख्रासँग सेक्स र बाख्राको मृत्युको खबरको निकै चर्चामा छ । घटना जुलाई २५ तारिखको हो तर चार दिनपछि मात्र यो चर्चामा आयो । मेवात पुलिसका प्रवक्ता जितेन्द्र कुमारका अनुसार यो मामलामा एफआईआर…
नर्मल डेलिभरी चाहनेले ध्यान दिनुपर्ने पाँच कुराहरू
२०७५, १० श्रावण बिहीबार ११:४८ July 26, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी । गर्भवती हुनु एक महिला आमा बन्नु हो । यो प्रक्रिया जति रोमाञ्चकारी हुन्छ कहिलेकाँहि त्यो भन्दा धेरै जटिल पनि बन्छ । नौ महिनाको गर्भवस्थाको समय हरेक महिलाको लागि ज्यादै कष्टदायी हुन्छ तर यसपछि प्राप्त हुने सन्तानलाभले ती सबै…
होमवर्क र क्लासवर्कमा पनि सेक्स गर्न सिकाइने स्कुल !
२०७५, २७ असार बुधबार १९:०७ July 11, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी । अस्ट्रियाको राजधानी भियना नजिकै एउटा यस्तो स्कुल छ । जहाँ विद्यार्थीहरुलाई ब्यबहारिक रुपमै सेक्स गर्न सिकाइन्छ । बिगत केही बर्षदेखी चल्दै आइरहेको उक्त स्कुलको नाम ‘भियना सेक्स स्कुल’ हो । स्कुलका अनुसार यो सेक्स स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना गरी…
बिहेअघि सेक्स गरेको थाहा हुन्छ कि हुँदैन ? जानीराखौ
२०७५, २६ असार मंगलवार ११:४६ July 10, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी : महिलाले विवाहअगाडि यौनसम्पर्क राखेरनराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आएरनआएको वा दुखेरनदुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ । अर्कातिर पुरुषमा लिंगको अगाडिको छाला फाटेरनफाटेको, पछाडिसम्म खुलेरनखुलेको आधारमा यौनसम्पर्क भएरनभएको…
२०७५, २५ असार सोमबार १५:३२ July 9, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी । केन्यामा एउटा अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । यस घटनाबारे थाहा पाउने मानिसहरू अचम्ममा परेका छन् ।भएको के रहेछ भने त्यहाँका एक व्यापारी होटेलमा आफ्नी घरेलु कामदारसँग यौन सम्पर्क गरिरहेका रहेछन् । तर त्यसैबेला ती व्यापारीको यस कर्तुतको…
युवतीलाई यौनसम्पर्क गर्नका लागि कसरी फकाउने ? जानी राखौँ
२०७५, २३ असार शनिबार २२:१८ July 7, 2018 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी : यौन जीवनका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु हुने गर्छन् । ती अध्ययनबाट यौनका बारेमा नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनबाट युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्क राख्नका लागि राजी बनाउने भन्ने बारेमा पत्ता लागेको छ । सम्भोग सुरु…